ျမန္မာသတင္းစံု – Page6– Welcome MMREPUBLIC
သူများတွေကိုအားကျပေမယ့် အပျိုကြီးအဖြစ်နဲ့ပဲနေတော့မယ်လို့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ လက်ရှိမှာတော့သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်ကနေ “ အပျိုကြီးဘဲ လုပ်တော့မယ်။ တစ်ခါတလေတော့လည်း သူများတွေကြည့်ပြီး အားကျတာပေါ့ ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဝေမျှခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေကစ်ကတော့ အမာခံပရိသတ်တွေ ဘယ်လောက်များလဲဆိုရင် We Love Group တွေအပြင် We Love Page တွေပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးတစ်လက်ပဲ …
ပရိသတ်တွေကို ဆိုနေကျပုံစံနဲ့မတူအောင်သီချင်းဆိုပြခဲ့တဲ့ အေးမြဖြူ
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အေးမြဖြူကတော့ ဒီနေ့မှာ ပရိသတ်တွေကို ပိုပြီး အချစ်ပိုရအောင်လုပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။အေးမြဖြူကတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲကြီးကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်နေစဉ်ကာလကတည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အပြည့်အဝရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်လေးတစ်ယောက်ပါ။ ငယ်စဉ်ကတည်းက အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်အနည်းငယ်ပညာရေးဘက်ကို ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ခဲ့ရတာကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားခဲ့ပါသေးတယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါပွဲကြီးကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး အနုပညာလောကထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အဆိုပိုင်းမှာသာမက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း …
ရဲခန္းထဲကို ကိုယ္တိုင္ဝင္လာၿပီး သူလမ္းေပ်ာက္ေနေၾကာင္း အသိေပးခဲ့တဲ့ ​ေခြးကေလး
ေခြးကေလးတစ္ေကာင္က အိမ္မျပန္တက္ေတာ့လို႔ သူလမ္းေပ်ာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ရဲစခန္းထဲ သူကိုယ္တိုင္လာၿပီး အသိေပးခဲ့တယ္ဆို ယုံနိုင္ပါ့မလား။ ဒါေပမယ့္ ဒီအျဖစ္အပ်က္က တကယ္ပါ။ ေခြးကေလးတစ္ေကာင္ဟာ မနက္ခင္း ေဝလီေဝလင္းေလာက္မွာ ရဲစခန္းထဲ သူ႕ဘာသာ လမ္းေလွ်ာက္ဝင္လာၿပီး အိမ္မျပန္တက္ေတာ့ပဲ လမ္းေပ်ာက္ေနတယ္ဆိုတာကို အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ေလာက္က အေမရိကန္နိုင္ငံ၊ တကၠဆက္ျပည္နယ္ရွိ Odessa ရဲစခန္းကို ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ေခြးကေလးတစ္ေကာင္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ အထဲလဲေရာက္ေရာ စုံစမ္းေရးဌာနေရွ႕က …
စကားလေးတွေပြောရင်း ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်ကာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ သားလေး မြတ်သူဗီဒီယိုဖိုင်
ပရိသတ်ချစ်ရတဲ့ ဂျင်းကောင် ဆိုတာနဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးက မြင့်မြတ်ကိုပြေးမြင်မယ်ဆိုတာ အသေချာပါပဲနော် ။ မြင့်မြတ်က အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို သာယာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကို လည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် ။ မြင့်မြတ်သားလေး မြတ်သူကတော့ ပရိသတ်တွေက ဂျူနီယာဂျင်းကောင်လို့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြပြီး အမေတူသားလေးကတော့ ဖြူဖွေးပြီး တအားကိုချစ်စရာကောင်းတာပါနော် ။ ပိုချစ်ဖို့ကောင်းလာပြီး လူလည်လုပ်တတ်လာတဲ့ မြတ်သူလေးကတော့ လိုချင်တာလေးတွေကိုလည်း …
စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီး ငိုချင်တာပဲသိတော့တယ်ဆိုတဲ့ ပိုပို
ချစ်ဖူးခဲ့သမျှတေးစီးရီးလေးနဲ့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိလာခဲ့သူပိုပိုကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိနေသူတစ်ယောက်ပါ။ရင်ထဲက ခံစားချက်စစ်စစ်တွေကို သီချင်းအဖြစ်ပြန်လည်အသက်သွင်းကာ ကရုဏာအသံလေးနဲ့သီဆိုတတ်သူပိုပိုရဲ့သီချင်းတိုင်းလိုလိုကိုတော့ မကြိုက်တဲ့သူမရှိလောက်အောင် ပရိသတ်ရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုကတော့ လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၉)ရက်နေ့မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးပွဲလေးကို ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးပွဲလေးကို အများကြီးမျှော်လင့်ထားပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေအများဆုံးရှိရာ မန္တလေးမြို့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ပွဲမှာဝတ်ဆင်မယ့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကအစ အဆန်းပြားဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။လတ်တလောမှာတော့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့နေတာဖြစ်တာကြောင့် လူအများစုကတော့ လူစုလူဝေးနေရာတွေကို သွားရမှာ ရှောင်နေကြတာမို့ ပိုပိုကတော့ …
ငွေသိန်း(၁၀၀) ကောက်ရသော်လည်း အသက်အန္တရာယ်ကြားက ပိုင်ရှင်ထံ ပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ သူ
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ၿပည္ၿမိဳ.၊ န၀န္းကမ္းနားလမ္းေန ဦးစန္း၀င္း(ဆုိက္ကားဆရာ၊ နိဗၺာန္ေဆာ္ ) ဆုိက္ကားနံပါတ္- ၁၆၆၁ ၿဖင့္ ဆုိက္ကားနင္းအသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းၿပဳေနၿပီး အက်ီအႏြမ္းေလး၀တ္၊ ဦးထုပ္အေဟာင္းေလးဆာင္းၿပီး ေနပူပူမွာ ဘ၀၀မ္းစာေရးကုိေၿဖရွင္းေနရေပမယ့္ စိတ္ဓါတ္ ရိုးသားၿမင့္ၿမတ္သူရဲ. ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသလွတဲ့ ၿဖစ္ရပ္ေလး ကုိဂုဏ္ၿပဳလုိက္ရပါတယ္(၃၀) ရက္ေန.က လစာထုတ္ရက္မုိ. ၿမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွာ ေငြထုတ္သူတြနဲ.စည္ကားလွတဲ့အခ်ိန္၊ေန.လည္ပုိင္းမွာ ဌာနဆုိင္ရာတစ္ခုက ေငြစာရင္းကုိင္၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ ၿမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ေဘးက ပီစီအုိဘးမွာ ေငြ ထုပ္ …
ကလေးမွေးထားပြီးပေမယ့် အပျိုတုန်းကထက်တောင်ပိုလှလာတဲ့ မြန်မာမင်းသမီးများ
ကေလးတစ္ေယာက္ကို ဂရုတစိုက္နဲ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပုစုပ်ိဳးေထာင္ဖို့ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူး။ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ရိွရိွ မိခင္ရယ္လို့ျဖစ္လာရင္ ကိုယ့္သားသမီးကို ကိုယ္တိုင္ အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ စီးပြားလည္းရွာ၊ ကေလးလည္းထိန္းရတဲ့ မိခင္ေတြအေနနဲ့ အပ်ိဳတုန္းကလို ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေတာင္ သိပ္ျပီး ျပင္ဆင္နိုင္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တစ္သားေမြးတစ္ေသြးလွဆိုတဲ့ စကားဆိုတဲ့အတိုင္း ကေလးေမြးျပီးမွ ပိုပိုလွလာတဲ့သူေတြရိွေၾကာင္း ျမန္မာမင္းသမီးေလးေတြနဲ့ သက္ေသျပလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ ထပ္ဆင့္အကယ္ဒမီ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ အနုပညာေလာကမွာ ဆယ္စုနွစ္နွစ္ခုေက်ာ္စာ ေနရာယူထားနိုင္သူေလးျဖစ္တဲ့ …
ပရဟိတ လူနာတင်ကားကို အနောက်ကလိုက်ပြီး ကားချင်းပွတ်ဆွဲ ပြဿနာဆင်းရှာ မိုက်ရိုင်းတဲ့ လူ (ရုပ်သံ)
ပရဟိတ လူနာတင္ကားကို အေနာက္ကလိုက္ျပီး ကားခ်င္းပြတ္ဆြဲ ျပႆနာ ဆင္းရွာ မိုက္ရိုင္းတ့ဲလူ (ရုပ္/သံ) လူလူျခင္း ဒုကၡေပးျခင္းမွ ကင္း႐ွင္းက်ပါေစ အမ်ားသိေအာင္ share ေပးပါ ရုပ္သံၾကည့္ရန္ credit သတင္းစံု unicode version ပရဟိတ လူနာတင်ကားကို အနောက်ကလိုက်ပြီး ကားချင်းပွတ်ဆွဲ ပြဿနာ ဆင်းရှာ မိုက်ရိုင်းတဲ့လူ (ရုပ်/သံ) လူလူခြင်း ဒုက္ခပေးခြင်းမှ ကင်းရှင်းကျပါစေ …
၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွက် ထီထိုးရန် ကောင်းသော မင်္ဂလာရက်များ ဒါလေးကြည့်ပြီ ထီထိုးပါနော်
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အတြက္ ထီထိုးရန္ ေကာင္းေသာ မဂၤလာရက္မ်ား (ဒါေလးၾကည့္ၿပီး ထီထိုးပါ) ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အတြက္ လ အလိုက္ ထီထိုးရန္ ေကာင္းေသာ မဂၤလာရက္မ်ား ( ၁၃၈၁-၁၃၈၂ )ခုႏွစ္ ၊ 2020-ခုႏွစ္ အတြက္ လအလိုက္ ထီထိုးရန္ ေကာင္းေသာ မဂၤလာရက္မ်ားကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ… ပရိတ္သတ္အားလံုး လဲ ထီဆုၾကီးေတြေပါက္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ…. …
ဦးဇင်းတွေ ကြွလာတာမြင်တာနဲ့ မြေပေါ်ထိုင်ချ ရှိခိုးကြတဲ့ မြို့
ခုအခ်ိန္ထိ ေရာက္ခဲ့သမၽွေနရာေတြထဲမွာ မေတြ႕ဖူးေသးတဲ့ အမွတ္မထင္ ေတြ႕လိုက္ရေသာ ေတာဘုန္းႀကီးကေလး အယဥ္ေက်းဆံုး ရတနာေျမ (သို႔ုမဟုတ္) ဓမၼစကူးလ္ၿမိဳ႕ အင္းေတာ္ေတာဘုန္းႀကီးကေလးၿမိဳ႕ထဲကို ဝင္လိုက္တာႏွင့္ ပထမဆံုးေတြ႕ရတာက ေျမႀကီးေပၚ က်က်နနထိုင္ၿပီး ရွိခိုးကန္ေတာ့ေနၾကတဲ့ ပံုရိပ္ေတြပါပဲ။ခုအခ်ိန္ထိ ေရာက္ခဲ့သမွ်ေနရာေတြထဲမွာ မေတြ႕ဖူးေသးတဲ့ အေကာင္းဆံုး အလွတရားေတြ ျဖစ္ပါတယ္​ေတာဘုန္းႀကီးကေလးတို႔ ေဒသမွာငယ္စဥ္တုန္းက ေတြ႕ရေသးေပမယ့္ ခုခ်ိန္ေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္သေလာက္နီးနီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ခုတခါ အမွတ္မထင္ ေတြ႕လိုက္ရေတာ့ ရင္ထဲမွာ …